TTSweet: Crazy Hair သမီး ၊ Crazy Hair မေမေ
Posted by T T Sweet at 3:14 PM
ko9December 10, 2012 at 3:39 PM
ပြပါအုန်း အမေကြီးရဲ့ခရေဇီဟဲကိုလဲမြင်ချင်စမ်းဘာဘိ ဟားဟားဟား
ဆုမြတ်မိုး December 10, 2012 at 4:43 PM
please post jujue in crazy hair photo :D
T T Sweet December 10, 2012 at 4:51 PM
ချုမြတ် ... အမေရော သမီးရော ခရေဇီဟဲတွေ တင်ထားတယ်လေ။ မမြင်ရဘူးလား။ အမေပုံကတော့ မမြင်ရလေ ကောင်းလေပဲ။း))
ဆုမြတ်မိုး December 10, 2012 at 5:08 PM
၀တ်စုံပြည့် ကိုပြောတာပါ တီဆွိရဲ့..ခုတော့ ဂျူဂျူးလေးခေါင်းလေးပဲမြင်ရတော့လေ ..ဟီးဟီး ဒီပိုစ့်လေးကိုတအားသဘောကျတယ်
AMK December 10, 2012 at 6:50 PM
တီဆွိ ၇ဲ့Crazy hair က ပို မိုက်စ်..ဂျူးဂျူး ဆံပင်လေးလဲ လှတယ်
တယောက်ထဲ သားသမီး တွေကတော. အဲလိုပါပဲအမရယ်
ကျမက သားဆိုတော. စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော.ထားတယ်
သမီးကတော. သားထက်စာရင် သိတတ်ပါတယ်လေ
မမိုး December 10, 2012 at 11:46 PM
တီဆွိတို့ သားအမိအကြောင်း ဖတ်ရတာ အမြဲ စိတ်ချမ်းမြေ့ရတယ်။
အိမ်က အမေကိုလဲ အရမ်းလွမ်းမိသွားတာပဲ။
ခရေဇီဟဲလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျော်နေမဲ့ပုံလေး စိတ်ထဲ တွေးပြီး
တဦးတည်းသော သမီးတို.ရဲ. အမေပုံစံ၊ မိဘပုံစံတွေ တပုံစံထဲ ကွက်တိမှ ကွက်တိပါဘဲ တီဆွိရယ်
သမီးရဲ့ ခရေးဇီးဟဲကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ရေပန်းစားမှာပဲဆိုကာ အမေကြီးမှာ ပီတိတွေဖြစ်နေသည်။
T T Sweet December 12, 2012 at 8:55 PM
Anonymous has leftanew comment on your post "ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ ...":
so cute sis sweet!!!
Shinlay December 16, 2012 at 8:29 PM
မိဘတွေရဲ့ မေတ္တာကို ခံစားမိသွားတယ်မဆွိ။
Vista December 18, 2012 at 2:30 PM
မောချက် .. ကလေဇီးဟဲလုပ်ရတာ .. အမေကြီးကိုယ်တိုင် ဝင်ပြိုင်လိုက်ရင် ပြင်စာတောင်လိုဘု ဟိဟိ
Soe Yu Nwe December 23, 2012 at 2:29 PM
မမဆွိ က သိပ်ရေးတတ်တာ ပဲ ... မေကြီး ကို လွမ်းသွားပြီ .. ဂျူဂျူ သိပ် ကံကောင်းပါသည်
San San Htun January 7, 2013 at 5:30 AM
အချိန်မပေးရတယ့် ခရေဇီဟဲကို မြင်ပြီး ပြုံးမိတယ်..ဂျူးဂျူးရဲ့ခရေဇီဟဲ ဝတ်စုံပြည့် မြင်ချင်သား...